DISTRIKAN’I BETROKA : Rongony 300kg nodorana, jiolahy miisa 6 tazomina vonjimaika natao famotorana
Manao tohivakana tanteraka ny fahatrarana zava-mahadomelina any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy iny raha toa saika ho isan-kerinandro no ahazoana loharanom-baovao mahakasika izany any an-toerana. 2 septembre 2019
Tahaka izany koa ny fiparitahana fitaovam-piadiana mahery vaika satria isan’ andro no ahazoana vaovao momba ny fahitana basy sy bala tsy ara-dalàna amin’ny Faritra maro eto amintsika . Am-perinasa ary mikaroka ireo olona ao ambadika mpikirakira izany ankehitriny ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, efa nisy ireo voasambotra kanefa ao koa ireo mbola karohina . Ankoatra ireo voly rongony amina hektara sarona teo aloha teo dia nahazoana angom-baovao hatrany ireo rongony bediabe nafatratra amin’ny kitapo.
Manginy fotsiny ireo tratra eo am-pivarotana azy eto an-drenivohitra Antananarivo no sady hita taratra rahateo koa fa lasibatra amin’ny fidorohana zava-mahadomelina ny tanora vao misondrotra , indrindra fa ireo tsy manan-katao izay lasa jiolahy ikoizana mihitsy amin’izao fotoana . Eo anatrehan’izay indrindra dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray indray ary fa rongony 10 gony mitotaly 200kg no tra-tehaky ny zandary mpanao fisafoana tao Andakana Betroka ny 30 aogositra , tokony ho tamin’ny telo ora maraina .
Nandritra ny fidinana ifotony notanterahan’ny zandary no tsikaritr’ireo jiolahy ny jiroben’ny ny fiara ka tafatsoaka izy ireo, navelany teny amoron-dalana ny rongony nentina izay voalaza fa avy any Andriry. Tamin’io andro io hatrany, tokony ho tamin’ny valo ora maraina dia nahazo tatitra tamin’ireo olona tsara sitrapo tao an-toerana indray ireto zandary mpanao fisafoana fa misy rongony marobe koa ao an-tranon’ny olona antsoina hoe Voantsiriry sy Fanampia. Natao tokoa ny fisavana ary dia tra-tehaka tao ireo zava-mahadomelina milanja 100kg niampy basy poleta vita gasy iray . Avy hatrany dia nogiazana ireo rongony tratra ireo ary nopotehina teo imason’ny manampahefana isan’ambaratongany tao an –toerana. Jiolahy miisa enina notanana vonjimaika hanohizana ny fanadihadiana mahakasika ilay basy vita gasy tratra nampiasain’izy ireo.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (179) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (122) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (80) 31 mars 2020